Tsara ve ny mpandahateny Cyber ​​Acoustics? - Faq
Tena > Faq > Ireo mpamily cyber acoustics - ahoana no hamahana izany
Ireo mpamily cyber acoustics - ahoana no hamahana izany
Tsara ve ny mpandahateny Cyber ​​Acoustics?
Amin'ny ankapobeny, ny CA-3602mitenymahazo feo mafy sy feo betsaraampy hihainoana Spotify na hijerena sinema. Aza manantena ny hamoaka ny antsipiriany kely rehetra amin'ny mozikao. Mavesatra be izy ireo, saingy tsy misy toerana firy ho an'ny avo sy midina.
Misaraka amin'ny enina 2026 ka ny olona tsara ao amin'ny Cyber ​​Acoustics dia tsara fanahy nandefa anay CA 2026 ho dinihina ka nanandrana nanavao ireo mpandahateny solosaiko taminà mpandahateny mpanara-maso efa antitra sy malaso teo aloha aho, ary ireo olona ao amin'ny cyber ku6 dia tsara fanahy handefa an'ity ho dinihina ka aleo mitsambikina amin'izay azonao ao anaty boaty. Ny boaty izay nanokatra dia niarahaba anao voalohany tamin'ny biriky herinaratra tena izy, narahin'ny fiantohana boky torolàlana ho an'ny mpampiasa torolàlana izay notononinao hoe ao daholo, avy eo manaraka anao ireo mpandahateny zanabolana roa izay manodidina ny efatra santimetatra na raisinao izao mba fantatray inona no ao anaty boaty. Tonga teto ianao mba handre ny feon'izy ireo ka hanomezako fampisehoana haingana momba ny toa inona ireo mpandahateny zanabolana ireo ary avy eo homeko anao ny fehin-kevitra momba ny vidiny ary rehefa tokony handeha ianao? Ireo mpandahateny ireo satria misy zavatra tiako momba azy ireo sy zavatra tsy tiako, fa ho tonga ao anatin'ny fotoana fohy isika, koa inona no eritreretiko marina momba ireo mpandahateny ireo? R ny vidiny sy ny rohy etsy ambany amin'ny famaritana ny vidin'ity lahatsoratra ity dia ambany $ 50 raha ny tena izy dia heveriko fa ambanin'ny $ 40 aza izay adala fa ny kalitaon'ny feo henonao ary tsy ny fitsapana tsara indrindra ho azy raha ny marina. tsara kokoa ny maheno azy mivantana fa tsy ny manandrana mandre azy amin'ny karazana loharanom-peo rehetra, fa afaka henonao kosa, naveriko ho 75 isan-jato izany ary tsy voaolana ao amiko, farafaharatsiny any an-tsofiko, ary ankehitriny ny feo dia sujet ary iray amin'ireo zavatra tsy raharahina miaraka aminy izao. Na dia tiako aza ny feo dia misy zavatra tsy tiako amin'ny rafitra ary zavatra iray heveriko fa mora atao izany dia azo amboarina ary izany fotsiny no tena izy ny halavan'ny tariby, satria manana tariby ultra-wide aho dia tonga amin'ny fotoana anaovako azy ireo 'eo afovoan'ny mpanara-maso fotsiny no azoko atao ary raha ny fahitako azy dia tadiaviko lavitra ny mon Suck itor mba hahatonga ahy hahatsapa ho tena madio famafana ka heveriko fa tsara ho an'i La ireo Mety ho tonga lafatra amin'ny fametrahana laptop ianao amin'ny fametrahana birao fa tsara ny fahitanao fa afaka mijery sarimihetsika hitako sary vitsivitsy henoko na nijery lahatsoratra tao amin'ny youtube aho ary nahafinaritra fa tsy ilay fanampiny Manana tariby mety hanitatra ireo mpandahateny dia zavatra iray iriko raha nampiharin'izy ireo izany, saingy tsy mpandrava fifanarahana izany mba hahafahanao maka azy ireo tokoa.
Ny tiako holazaina dia ny vidiny tsy azonao andeha ary antenaina fa nanampy anao izany raha nampahafantatra ahy izany tamin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany raha tianao ity lahatsoratra ity, alao antoka fa mitehaka ity bokotra toy ity ianao ary toa ahy foana hoy ireo bandy, mandra-pahatongan'ny manaraka izahay mivory
Aiza no anaovana cyber acoustics?
Fa misy inona ry zalahy Kristiana seg eto anio, hamafa ny rafitry ny zanabolana subwoofer cyber acoustic aho. Zahao hoe Toa 360. Ireo dia mpandahateny sasany amin'ny solosaina.
Hampiasa azy ireo amin'ny solosaina findaiko aho ary hiezaka hijery raha afaka mampiasa azy ireo amin'ny fahitalavitra aho mba ho toy ny rafitra manodidina azy, izao i Dorun any Amazon izay manodidina ny $ 40 miaraka amin'ny hetra ary amin'ny sambo dia heveriko fa ny vidin'ny fandefasana valo dolara aho ka 150 dolara ary avy amin'izay novakiako ireo dia noheverina ho ny tsara indrindra indrindra ka hoatra ny nahafantaranao izay ilako fanafody abaya ary izany indrindra no fantatro fantatrao fa mijery anao aho ary nanafatra izany aho tamin'ny asabotsy, tena nibitsika izany ary haingana dia haingana ireo bandy ireo, ka androany alatsinainy tsara dia tsara, ka eo dia ao anaty boaty Cyber ​​Acoustic CA 3602, ity no maodely, avelao ary aho ' mieritreritra aho fa misy zavatra hafa hafa ao, tsia ary tena mahafaly izany, fa eo aho, manana izany ianao any ary ireo no mpandahateny ao amin'ny subwoofer sub misy fandraketana tsara kokoa any subwoofer 30 watt art of rms tsara aho Miala tsiny fa manana ny rafitra mpampita ny heriko aho fa tsy haiko fa vao hitako fa ireo no tsara indrindra tiako dia ny mifanaraka amin'ny anao ipod na iphone youriDevice na inona na inona henonao mozika ary manana bokotra iray ahafahanao mifehy ny habeny sy ny fotony izay tsara. Nahazo bebe kokoa izany tamin'ny fampiasana ny lamosina, saingy andao hizaha azy io, angamba apetakao ity raha ok ianao ka mahafatifaty aho, izany no hataoko hamafisina ary avelako hampiasaina amin'ny mpamaky feo. blah blah azoko antoka fa misy antoka ao, any ho any, Lawson, tsy maninona izy ireo, whoa ary eto no fonosina plastika ireo mpandahateny, izao dia hasehoko an-dry zalahy izay tena haingana be ry zareo, raiso iray, manimbolo vaovao, tsara, tsy anananao ity no tsapan'ny iray amin'ireo mpandahateny plastika misintona toy ny manamarina vovoka be dia be nefa na inona na inona ary misy roa amin'izy ireo dia toa manana zavatra bitika kely ilay izy. . Vita amin'ny plastika izy ireo ka toa antsasaky ny karazana henjana izany ka mila mitandrina sy mikarakara azy ireo eo anilany ianao manana tariby taonina ity no mpanara-maso noresahiko momba ny ahafahanao mifehy ny fotony amin'ny volony. Tena tsara amin'izy ireo ny manana tariby mba hahafahanao mampiditra azy ireo, tsy fantatro fa ho tsara fotsiny aho, ity ny subwoofer hahafahako manao zoom amin'ny fomba ahitanao ilay subwoofer? tsy tsara izany fa tsara, ka tendreo aho, tsara, ny tiako holazaina dia hoe raha afaka manala ny rano amin'ny sefo aho ary ity misy ilay subwoofer izay manana olona manana tag ary misy subwoofer mainty izy ary toy ny ambonin'ny matte, noho izany dia toa hanintona vovoka anao aho, manana inona izany indray ary tsy haiko akory ny cyber ciseklogo sy ity lafiny malefaka eto ary avy eo ny fifandraisana amin'ny ipod, noho izany eh ry olona fa tena Ny boaty rehetra dia mazava ho azy fa hanao lahatsoratra famerenana aho ary toa tsy maninona ity trano ity fa hatsofoko izany, koa raha te hahita izany ianao dia mandrosoa hisoratra anarana eto ambany raha tianao ilay lahatsoratra, tohizo ary toa ahy ary, ho tratrako ianareo ry Bruce avy eo
Afaka mampiasa inona ireo mpandahateny cyber Acoustics?
Ny mpandahateny informatika Cyber ​​Acoustics sy ny rafi-peo any an-dakilasy dia mety indrindra amin'ny fianarana fiteny, ny patolojia amin'ny kabary, ny fandaharam-pianarana roa, ny foibe fihainoana ary ny fandaharam-potoana famakiana aloha, ary koa ny fampiasana amin'ny efitrano malalaky kely, efitrano famokarana AV / haino aman-jery, ary ny efitrano fianarana lehibe na kely.
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny headset acoustics cyber amin'ny solosaina?
Ampidiro ao amin'ny seranan-tsambo “Headphone” ny tariby maitso Cyber ​​Acoustics. Ampidiro ao amin'ny port 'Mikropono' na 'Mic' ny tariby mavokely an'ny loha-loha. Tsindrio ny kisary mpandahateny eo akaikin'ny famantaranandro eo amin'ny fantsom-bolan'ny solo-sainanao hanamboarana ny haavon'ny volan'ny headset.
Iza ny tsipika Audio tsara indrindra amin'ny acoustics cyber?
Ny tsipika audio an'ny Curve.Series avy amin'i Cyber ​​Acoustics no farany amin'ny famolavolana sy fanatsarana toetra amam-peo amin'ny vidiny izay manaitra ny filàna rehetra.
Aiza ny port microphone amin'ny headset cyber acoustics?
Ny seranan-tsambo mikrô dia mety misy ny teny hoe 'Mic' na 'Mikrophone' mihoatra na ambanin'ny seranan-tsambo, na kisary mikrô mihoatra na ambanin'ny seranana. Ampidiro ao amin'ny seranan-tsambo “Headphone” ny tariby maitso Cyber ​​Acoustics. Ampidiro ao amin'ny port 'Mikropono' na 'Mic' ny tariby mavokely an'ny loha-loha.